Ukuphulukana nomzi mveliso wenqwelomoya ngenqwelomoya ephezulu kwi-200 yezigidigidi kwi-2020-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukuphulukana nomzi mveliso wenqwelomoya ngenqwelomoya ephezulu kwi-200 yezigidigidi kwi-2020-2022
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abantu abalahlekelwanga ngumnqweno wokuhamba njengoko sibona ukomelela kwintengiso yasekhaya. Kodwa zibanjiwe kuhambo lwamanye amazwe ngezithintelo, ukungaqiniseki kunye nobunzima.
Ukuphulukana nomzi mveliso kulindeleke ukuba kunciphise ukuya kwi-11.6 yezigidigidi ngo-2022 emva kokulahleka kwe- $ 51.8 yezigidigidi ngo-2021 (kubi kakhulu kwi-47.7 yezigidigidi yelahleko eqikelelwa ngo-Epreli).
Ibango (elilinganiswe kwii-RPKs) kulindeleke ukuba lime kuma-40% ama-2019 amanqanaba angama-2021, enyuke aye kuma-61% ngo-2022.
Inani lilonke labakhweli beenqwelo moya kulindeleke ukuba lifike kwi-2.3 yezigidigidi ngo-2021.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ibhengeze imbonakalo yayo yamvanje yokusebenza kwemali yecandelo leenqwelo moya.
Ukuphulukana nomzi mveliso kulindeleke ukuba kunciphise ukuya kwi-11.6 yezigidigidi ngo-2022 emva kokulahleka kwe- $ 51.8 yezigidigidi ngo-2021 (kubi kakhulu kwi-47.7 yezigidigidi yelahleko eqikelelwa ngo-Epreli). Uqikelelo lwelahleko yeNet 2020 ihlaziyiwe yaya kwi-137.7 yezigidigidi (ukusuka kwi-126.4 yezigidigidi). Ukudibanisa oku, ilahleko iyonke yecandelo kwi-2020-2022 kulindeleke ukuba ifike kwi-201 yezigidigidi zeedola.
Inani lilonke labakhweli kulindeleke ukuba lifike kwi-2.3 yezigidigidi ngo-2021. Oku kuyakukhula ukuya kwi-3.4 yezigidigidi ngo-2022 ngokufanayo kumanqanaba ka-2014 nangaphantsi kakhulu kwabahambi abayi-4.5 bhiliyoni ngo-2019.
Imfuno eqinileyo yomthwalo womoya kulindeleke ukuba iqhubeke nge-2021 ibango kwi-7.9% ngaphezulu kwamanqanaba e-2019, ikhule iye kwi-13.2% ngaphezulu kwenqanaba le-2019 ngo-2022.
“Ubukhulu bengxaki ye-COVID-19 yeenqwelo-moya bukhulu kakhulu. Ngaphezulu kwexesha le-2020-2022 yelahleko iyonke inokudlula kwi-200 yezigidigidi zeedola. Ukusinda kwiinqwelo-moya ziye zanciphisa ngokumangalisayo iindleko kwaye zatshintsha ishishini labo kuwo nawaphi na amathuba akhoyo. Oko kuyakubona ilahleko ye- $ 137.7 yezigidigidi ye-2020 yehle ukuya kwi- $ 52 yezigidigidi kulo nyaka. Kwaye oko kuya kuqhubeka kunciphisa ukuya kwi-12 yezigidigidi zeedola ngo-2022. Ngelixa imiba enzima ihleli, indlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo iya kubonakala. Ukubhabha ngenqwelomoya kubonisa ukomelela kwakhona, utshilo UWillie Walsh, uMlawuli Jikelele weIATAal.
Ishishini lempahla yomoya liqhuba kakuhle, kwaye uhambo lwasekhaya luza kufikelela kumanqanaba engxubakaxaka ka-2022. Umceli mngeni ziimarike zamanye amazwe ezihlala zixinezeleke kakhulu njengoko imiqathango ebekwa ngurhulumente iqhubeka.
“Abantu abawuphelanga umnqweno wabo wokuhamba njengoko sibona ekomeleleni kwintengiso yasekhaya. Kodwa zibanjiwe kuhambo lwamanye amazwe ngezithintelo, ukungaqiniseki kunye nobunzima. Oorhulumente abaninzi babona ukugonywa njengendlela yokuphuma kule ngxaki. Siyavuma ngokupheleleyo ukuba abantu abagonyiweyo akufuneki inkululeko yabo yokuhamba inyiniwe nangayiphi na indlela. Ngapha koko, inkululeko yokuhamba sisikhuthazo esihle kubantu abaninzi ukuba bagonywe. Oorhulumente kufuneka basebenzisane kwaye benze konke okusemandleni abo ukuqinisekisa ukuba izitofu ziyafumaneka kuye nawuphina umntu ozifunayo, ”utshilo Walsh.
Inyama yehagu yeVegetarian vs Inyama yehagu yokwenyani: Ukwenyuswa kweehagu okutsha...